Hisintona | WordPress.org Malagasy
Mampiasà ny rindrankajy mampiodina ny 43%-n'ny web
Mety hiakatra amin'ny fotoana rehetra, sy amin'ny toerana rehetra ny aingam-panahy
Mamoròna na manitsia lahatsoratra eny am-pandehanana amin'ilay application amin'ny finday.
Fantaro misimisy kokoa ireo applis finday
Mety hanahirana ny fisafidianana mpampiantrano tranonkala, izany no nahatonga anay nisafidy vitsivitsy amin'ireo tsara indrindra ahafahanao miainga.
Bluehost dia mankafy WordPress ary manome sehatra farak’izay tsotra sy kinga ahafahanao manorina ny tranokalanao. Tolotra WordPress misy anarana tranokala sy SSL maimaimpoana miampy fanampiana tsy akiato 24/7, antony mahatonga ny WordPress mamporisika ny olona hisafidy an’izy ireo nanomboka tamin’ny taona 2005.
SiteGround dia manolotra tranokala sy fanampiana avo lenta na teknisianina ianao na tsia. Avia ary hisitraka ny tolotra WordPress miaraka amin’ireo mpanjifa an-tapitrisany raha te ahazo ny fanampiana izay ilainao amin’ny sarany izay hahafaly anao.
Jereo avokoa ireo mpampiantrano tranonkala atoronay anao
Tsy voasanda vola nefa maimaimpoana.
Misintona WordPress ho ampiasaina amin'ny tranonkalanao.
Hisintona ny WordPress 5.9.3
Anisan'ny mampalaza ny WordPress ny fahafahanao mi-install azy ao anatin'ny 5 minitra, mora kely ny mampandeha ny WordPress na dia amin'ny voalohany indrindra aza. Ity misy torolalana tsotra afaka arahinao mandritra ny installation.
Fampilazana vokatra vaovao
Te hahazo fampilazana rehefa misy andiany WordPress vaovao mivoaka ? Midira amin'ny lisitra email famoaham-baovao WordPress dia handefasanay hafatra mahafinaritra ianao rehefa misy mivoaka.
Amporisihina hoe na Apache na Ngix no ampiasaina satria ireo no safidy matanjaka indrindra hampandehanana ny WordPress, fa tsy voatery ho ireo nefa no safidiana.
Ireo Vokatra rehetra
Misitraka ny vokatra WordPress farany ianao izao!
Raha mila tolo-tànana, tsidiho ny Tahirin-kevitra sy ny Sehatra Fifanampiana.
Avia hihaona amin’ireo mpankafy WordPress sy hizara ny traikefanao anaty Vondrona Fihaonana WordPress na any amin’ny WordCamp.
Ho fanohanana ny fanabeazana momba ny WordPress sy ny rindrakajy open source, manomeza fanampiana ny Fondation WordPress.